Iindaba - Leyo yibhotile endala yobomi obutsha, iCoca-Cola RPET isambulela selanga "sihleli" Isikhululo sikaloliwe saseQingdao
Leyo yibhotile yakudala yobomi obutsha, iCoca-Cola RPET isambulela selanga "esizinzileyo" Isikhululo sikaloliwe saseQingdao eMantla
Nge-Agasti ka-2020, kwindawo ephambili yokuwela abantu eQingdao North Railway Station, kwabekwa iiambrela ezikhethekileyo, apho izinto zineempawu zeQingdao ezinje ngokutshiza, ulwandle kunye nolwakhiwo. Awona akhangeleka kakhulu yayingamagama "bendikade ndiyibhotile yeplastiki" kwaye "Siyakhathala" eprintwe emaphethelweni esambrela, etsala umdla wabahambi ngeenyawo.
Iambrela inantoni yokwenza neebhotile zeplastiki? Kuyavela ukuba zonke ezi zambrela zenziwe ngeebhotile zeplastikhi. Emva kokurisayikilisha, iibhotile zeplastikhi ezingenanto zenziwa ngothotho lweenkqubo kwaye ekugqibeleni zalukwa zaya kuluhlobo olutsha lwelaphu eliluhlaza okusingqongileyo, elilelithi lelaphu leRPET, elingumbono omtsha kwicandelo lokuphinda kusetyenziswe izinto. Ungasebenzisa ukuya kwiibhotile zeplastiki ezindala ezili-17 ukwenza isambrela selanga kwaye uyisebenzise kwakhona.
Kuyaqondakala ukuba eziambrela zelanga zivela kumxholo wophuhliso oluzinzileyo lweCoca Cola- "Akukho nkunkuma emhlabeni", yenzelwe ukuxela umjikelo wobomi opheleleyo we-PET, ukwenzela ukuba abantu abaninzi baqonde iipropathi zoovimba beplastiki ye-PET kunye ukubaluleka kokurisayikilisha.
Kule minyaka idlulileyo, iCofCO Coca-Cola (Shandong) Co., Ltd. izibophelele ekuncedeni ukudala ubuhle besixeko, impucuko kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo, kugxilwe kwizinto ezintsha nakwintlalontle yoluntu, ukwakha ngokudibeneyo ukwakhiwa kwempucuko yaseQingdao .
Impahla eyolukiweyo eyenziwe ngefayibha erisayikilisisiweyo ngokurisayikilisha "Ibhotile yeCoke" inokuphinda isetyenziswe kwakhona kwifayibha ye-PET ene-100% yempahla ehlaziyiweyo, enokunciphisa inkunkuma ngokufanelekileyo. Okwangoku, ukusetyenziswa kweebhotile zesiselo seplastiki se-PET kuphezulu kakhulu. Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona iibhotile zesiselo esilahliweyo zePET akunciphisi kuphela ungcoliseko lokusingqongileyo, kodwa kuguqula inkunkuma ibe bubutyebi.
Kwi-PVC equkethe i-chlorine (ngowona mthombo uphambili we-dioxin kunye ne-dioxin ibonakalisiwe i-carcinogens) kwaye iqulethe ungcoliseko lokusingqongileyo lwesinyithi esinzima, i-plasticizer, njl. ilinganiswe, inikezelwe ukubuyisela iimveliso zePVC, ibe sisizukulwana esitsha somthengisi wezinto zokukhusela okusingqongileyo.
Ixesha Post: Sep-08-2020